> Resource> iCloud> Olee otú ndabere iCloud Ndi ana-akpo ka PC
Ọ bụ ezi echiche nkwado ndabere na mpaghara kọntaktị gị na gị na iCloud. Ịkpachapụ anya, ị nwekwara ike chọrọ nkwado ndabere na mpaghara iCloud kọntaktị na PC, Gmail, Outlook na ndị ọzọ na akaụntụ. Mgbe ahụ, mgbe ị na ihichapụ kọntaktsị na iCloud, i nwere ike n'otu ntabi-esi na ha azụ na kọntaktị ndabere faịlụ na PC gị. Ebe a, isiokwu a na-agwa gị ihe dị mfe ngwọta maka akwado họrọ ma ọ bụ kọntaktị niile na iCloud gị PC. All na unu ga-akwadebe bụ ka nwere ihe iTunes enyi ya nke aha Wondershare TunesGo. Na nke a software, na ị na-enwe ike ndabere ọ bụla kọntaktị na iCloud.
Download TunesGo nkwado ndabere na mpaghara kọntaktị site na iCloud.
Cheta na: Tupu imalite iji MobileGo maka bụ ndabere gị na-agụnye kọntaktị, ị kwesịrị ị na abanye n'ime gị ígwé ojii akaụntụ na gị iPhone, iPod ma ọ bụ iPad. TunesGo n'ụzọ zuru ezu na-akwado ọtụtụ iPhnes, iPods na iPads. Pịa ebe a iji nweta ihe Ama banyere akwado Apple ngwaọrụ.
iCloud ndabere kọntaktsị na mfe nzọụkwụ
Ugbu a, na-TunesGo arụnyere na gị na PC. Ẹkedori ya, na ị na-ahụ bụ isi window gosiri n'okpuru.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ iPhone / iPod / iPad ka PC
Jikọọ gị iPhone, iPod ma ọ bụ iPad ka PC na eriri USB. Ozugbo ọ ejikọrọ, TunesGo ga chọpụta ma na-aghọta gị iPhone, iPad ma ọ bụ iPod. Mgbe ahụ, dị ka ị na-ahụ, data gụnyere music, foto na kọntaktị na gị iPhone, iPod ma ọ bụ iPad ga-egosipụta na-ekpe sidebar nke isi window.
Nzọụkwụ 2. ndabere kọntaktị na iCloud
Ọ bụrụ na ị bịanyere aka na gị iCloud akaụntụ, kọntaktsị na ọ ga-gosiri na "Ndi ana-akpo" udi. Pịa iCloud ìgwè. Kọntaktị niile na iCloud egosi na nri ebi ndụ. Họrọ kọntaktị na ị chọrọ ndabere ma ọ bụ họrọ kọntaktị niile.
Mgbe ahụ, pịa "Import / Export"> "mbupụ niile Ndi ana-akpo"> "Export kọntaktị ahọrọ"> "ka A Single vCard File", "ka otutu vCard Files" ma ọ bụ "CSV File". Mgbe faịlụ nchọgharị window Pop elu, ịnyagharịa na ebe ebe ị ga-amasị ịzọpụta vCard faịlụ (s). Mgbe ahụ, TunesGo amalite nkwado ndabere na mpaghara iCloud kọntaktị.
Cheta na: Tupu ndabere, ị nwere ike idezi, jikota ma ọ bụ hichapụ iCloud kọntaktị gosiri na gị iPhone. Mgbe ahụ, họrọ kọntaktị na ị chọrọ ndabere. Cheta na iCloud kọntaktsị na nkesa Ịntanetị gaghị gbanwere ya.
Ekele! Ị kwadoo iCloud kọntaktị na PC gị. N'ezie na TunesGo, na ị na ike nke na-akwado iCloud kọntaktị na Outlook 2003/2007/2010/2013, Outlook Express, Windows Address Book, na Windwos Live Mail.
Gbalịa TunesGo ka iCloud kọntaktị ndabere.
Olee ka jikota oyiri Kọntaktị na iPhone
iCloud Kpọchiri Akpọchi: Olee otú uzo iCloud ebighị on iPhone
Olee otú Iji Idozi Common iCloud mmekọrịta Issues?